मुकेश अम्बानीकाे तलब कति ? हेर्नुहोस – Sawal Nepal ||The Power of Information
मुकेश अम्बानीकाे तलब कति ? हेर्नुहोस
रिलायन्स इन्डष्ट्रिका अध्यक्ष मुकेश अम्बानीले लगातार ११ औं वर्षसम्म आफ्नो तलब प्याकेजमा वृद्धि गरेका छैनन् । सन् २००७– ०९ देखि उनको प्याकेज १५ करोड भारुमा स्थिर छ । कम्पनीको वार्षिक रिपोर्टमा व्यवस्थापन तहमा तलब कम राखेर व्यक्तिगत उदाहरण पेश गर्ने इच्छा जारी गर्दै मुकेश अम्बानीले तलब नबढाएको बताएका छन् ।
मुकेश अम्बानीका ‘कजिन’ निखिल मेसवानीको प्याकेज बढेर २०.५७ करोड भारु भयो भारतीय मिडिया भास्करका अनुसार २०१८–१९ मा मुकेश अम्बानीको प्याकेज
तलब भत्ता – ४.४५ करोड भारु, कमिशन – ९.५३ करोड भारु, अतिरिक्त सुविधा – ३१ लाख भारु, निवृत्तिभरण रकम – ७१ लाख भारु, कुल – १५ करोड भारु
यद्यपि, रिलायन्सका अन्य सबै पूर्णकालीन निर्देशकको प्याकेज पछिल्ला आर्थिक वर्षमा राम्रै तरिकाले वृद्धि भएको छ । मुकेश अम्बानीका कजिन निखिल र हितल मेसवानीको प्याकेज बढेर २०.५७–२०.५७ करोड भारु भएको छ । उनीहरुको प्याकेज सन् २०१७–१८ मा १६.५८–१६.५८ करोड भारु थियो । सन् २०१५–१६ मा निखिलले १४.४२ करोड भने हितलको १४.४१ करोड भारु पाएका थिए । सन् २०१४–१५ मा दुबैको प्याकेज १२.०३–१२.०३ करोड भारु थियो ।
कम्पनीका प्रमुख व्यक्तिमा संलग्न कार्यकारी निर्देशक पी एम एस प्रसादको प्याकेज सन् २०१८–१९ मा १०.०१ करोड भारु भयो । सन् २०१७–१८ मा ८.९९ करोड भारु थियो । रिफाइनरी प्रमुख पवन कुमारले ४.१७ करोड भारु पाए । सन् २०१७–१८ मा उनको प्याकेज ३.४७ करोड भारु थियो ।
मुकेश अम्बानीकी श्रीमती एवं गैर कार्यकारी निर्देशक निता अम्बानीले ‘सिटिङ फिस’ को रुपमा ७ लाख भारु र कमिशनको रुपमा १.६५ करोड भारु पाइन् । सन् २०१७–१८ मा यो झुक्तान ६ लाख र १.५ करोड भारु थियो । एसबीआईकी पूर्व अध्यक्ष अरुन्धती भट्टाचार्यलाई कमिशनको रुपमा ७५ लाख भारु दिइयो । उनलाई १७ अक्टोबर २०१८ मा रिलायन्स इन्डष्ट्रिजको बोर्डमा नन–एक्जिक्यूटिभ डिरेक्टरको रुपमा समावेश गरिएको थियो । Title Photo: laughingcolours.com
अष्ट्रेलियाको डढेलो नियन्त्रणमा खटेको जहाज दुर्घटना, तीनको मृत्यु
अमेरिकामा फेरि अर्को गोलीकाण्ड, २ जना घाइते (भिडियो)
कसरी हुन्छ कोठामा सामूहिक निधन ?
युक्रेनी विमानमा दुईवटा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरिएको इरानले गर्‍यो पुष्टि